မိသားစုအပြာ:အခမဲ့သင်ျ Xxx ဂိမ်းအတွင်းအပြင်!
သင်ရှာဖွေနေများအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အကြီးမားဆုံးထဲမှာသင်ျအရေးယူ? သင်၏နာငြီးငွေ့သောအရပ်တို့ကိုမအမှန်တကယ်တော့အတိုင်းကြယ်ကုန်ပစ္စည်းမှဖြောင့်သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာ? ကောင်းစွာ၊အဘို့အကောင်းသတင်းကမိသားစုညမ်းဂိမ္းကဒီမှာကျွန်တော်တို့ပေးပို့ဖို့တစ်ဦးစွန့်စားမှုအပေါ်မည်မဟုတ်ကြောင်းယုံကြည်! အဆိုပါအဖွဲ့သည်ဒီမှာတင်ခဲ့တဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာငွေပမာဏကြိုးစားအားထုတ်မှုသို့သောင်အပူဆုံးပတ်ပတ်လည်ဂိမ်းမည်သူမဆိုများအတွက်ချစ်သောသူကြီးမြတ်မိသားစုသံုးေနှင့်ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နိုင်ဖြစ်ခြင်းမှသင်တို့နှင့်အတူသူတို့ကိုမျှဝေ။, ပေါ်တွင်လေယာဉ်ဆင်းသက်ခြင်းဖြင့်ဤဝက်ဘ်ဆိုက်၊သင်ရှာဖွေတွေ့ရှိ၏အနာဂတ်သင်ျဂိမ်းကစားအွန်လိုင်း၊သင်မွေ့လျော်နိုင်ပါလိမ့်မယ်၊အရာအားလုံးကိုရှိသည်ပေးဆောင်ခြင်းမရှိဘဲအပျော်အပါး။ မှန်တယ်–ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုလာရန်လိုသူမည်သူမဆိုအတွက်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တယ်မရှိဘဲလွှဲပြောင်းတစ်ရာခိုင်နှုန်း၊ပြီးဒါကကျွန်မတို့အစီအစဉ်ကိုထားမှယခုအထိအပူအသေခံ၏။, ဘာမှမရှိဘူးရဲ့အတော်လေးရှိခြင်းကဲ့သို့ကြီးမားသောကျွန်းစုကြီးသင်ျလိင်ဂိမ်းများကစားရန်ရှာနေသည့်အခါမှအပယ်တွင်လူရှုပ်ခြင်း၊ဒါကြောင့်ပျော်မွေ့ကျေးဇူးပြုအပြည့်အဝရွေးချယ်ခြင်း၏ခေါင်းစဉ်နေရာနှင့်မေ့:သင်လိုချင်တာအခါတိုင်းအရာတစ်ခုခုရဖို့ရန်အသင့်ရိုးကျော်၊ကျနော်တို့ကရရှိပါသည်သင်ဖုံးလွှမ်းပြီးတော့အချို့!
အလုပ်အတွက်အဆင်ပြေသည်စာသားအတိုင်းမည်သူမဆိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ရရန်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ဖူးလုံးကိုပေါ်တယ်မှာမိသားစုညမ်းဂိမ်းဖို့တတ်နိုင်ရောက်ကြည့်ရှုအားဖြင့်။ ဤသည်အမှုဆောင်ဆုံးဖြတ်ချက်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာအရမ်းအစမှာအပလက်ဖောင်း၊ရိုးရှင်းစွာကြောင်းယုံကြည်ကြသောကြောင့်လူတိုင်းရှိသင့်လျင်မြန်စွာနဲ့အဆင်ပြေမှဝင်ရောက်ခွညမ်း။ ကျွန်တော်ဆိုလိုသည်၊ဒါကြောင့်အခိုက်အတန်:မအရပ်၌ငါထိုင်နှင့်အတူမိမိတို့အအငအတွက်မိမိတို့လက်အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ဂိမ်းပြီးအောင်ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည့်အခါသူတို့ပဲသွားအချိန်မှာရှေ့ဆက်ကစားတစ်ခုခုချက်ချင်း။, ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်ပြပါလိမ့်မယ်အတွက်အချိန်မှာအားလုံးသောမိသားစုညမ်းဂိမ်းများသည်ကယ်မလွှတ်နိုင်သောသူအချို့အမှန်တကယ်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ခေါင်းစဉ်နှင့်အချက်ကိုကြောင်းသင်ရနိုင်၊သူတို့အထဲသို့ဖြောင့်သွားသည်ဟုဆိုလိုသည်သင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးအတူပတ်လည်မှာရှုပ်ထွေးငှါမဆိုပျော့သို့မဟုတ်သောက်သုံး။ ဒီစကိုဆိုလိုတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေနေသောရှိပါတယ်ထွက်ပေါ်သို့မဟုတ် MacOS ဆဲနိုင်ကစားရန်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ရှိသည်။ ဒါကြောင့်သင်သည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးလက်ရှိပြေးတစ်ဦးဗားရှင်းများ၊မြေခွေးမှာသို့မဟုတ်ဆာဖာရီသည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း-မကြာသေးမီ၊အားလုံးဂိမ်းအတွင်းမိသားစုညမ်းဂိမ်းများကဲ့သို့ပြေးတစ်ဦးအကြွင်းမဲ့အိပ်မက်။, ကျွန်မတို့ဟာဆာင္မႈအဆိုပါစနစ်အောင်လူများအပေါ်အနိမ့်စက်သွားကြသည်မဟုတ်ရှိသည်လည်းအများအပြားကိစ္စရပ်များကို–တော်တော်လေးအပြစ်တင်ဖွယ်ချိုမြိန်၊မှန်သော?
အလွန်ပထမဦးဆုံးအရာကလူတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြထားမိသားစုညမ်းဂိမ်းအကြောင်းအချက်မှာလုံးဝလူသတ်သမားအရည်အသွေးအကြောင်းအရာမှာအဲဒီအကြောင်းကိုမပြောင်းလဲဖို့ဆိုအချိန်ကြာ! အဆိုပါအကြောင်းပြချက်အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းချက်အကြောင်းအရာအရည်အသွေးကြောင့်သမိုင်းကြောင်းအ၊အပြာလုပ်ငန်းအတွက်ဂိမ်းကစားအာကာသခဲ့နိုင်မှာဒီဒိုမိန်း။ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ပြသရန်လူတိုင်းကအမှန်တကယ်ခက်ခဲဖန်တီးရန်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးခေါင်းစဉ်များ၊နှင့်အခြားယိုပဲၾကပျင်းသည့်အခါသူတို့မပေးပါဘူးသင်သည်လက်လှမ်းဖို့သူတို့ကို!, အဆိုပါအဖွဲ့သည်ဒီမှာမိသားစုညမ်းဂိမ်းများ၏ဖွဲ့စည်းအချို့၏အလွန်အကောင်းဆုံး ၃D အနုပညာရှင်နှင့်ဗျစ်ပတ်ပတ်လည်များအားလုံးရှိသည်အဘယ်သူကိုအကျယ်ပြန့်အတွေ့အကြုံမှကြွလာသောအခါသူကအတူလုပ်ကိုင်ဂရပ်ဖစ်ဒီအရည်အသွေး။ မျှော်လင့်သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်မှနမူနာပစ္စည်းများအတွက်ခရီးစဉ်အကြောင်းမဟုတ်အချို့သောသောက်သုံးမကျတဲ့စကားဖြစ်အပျက်သင်အမှန်တကယ်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်သွားကြသည်တဲ့ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးညစ်ညမ်းဂိမ္းချမ်းသာသောကြည့်ရှုစိတ်ကူး။, ကျွန်တော်ဆိုလိုသည်မှာ–အခါနှိုင်းယှဉ်ပြီးမှအခြားသောအရပ်တို့ထွက်ရှိပါတယ်၊အကွောငျးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည်မကိုင်တစ်ခုဖယောင်းရန်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ထုတ်လုပ်ရန်ကြိုးစားအဖြစ်သူတို့ကစေခြင်းငှါ၊ဒါကြောင့်ကိုယ့်သွားမယ့်အမှုဖြစ်လိမ့်မည်ဖို့သူတို့ရဲ့ဂိမ်းအစဉ်အဆက်အဖြစ်ကိုကြည့်အရသာနှင့်နှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်ငါတို့ဥစ်စာ။ ငါတို့သည်ငါတို့စိတ်နှလုံးကိုနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ထဲသို့ဤခေါင်းစဉ်နိုင်အောင်သင်အလွန်အကောင်းဆုံးရနိုင်မှာသင်ျ။ ကျနော်တို့အကြောင်းပြောနေတာ၏အကောင်းဆုံးမြားချွတ် jerking သူတို့သား၊သမီးပေးခြင်း daddies သူတို့ရဲ့ asses ပြီးတော့–စိတ်ကူးသင်ျကြောင်းရှိသည်လိမ့်မယ်သင်ထုတ်လွှတ်ကြိုးအတွက်အချိန်မှာအားလုံး!
ကျေးဇူးတင်ဖို့အချိန်ယူပြီးလာလည်မှာကျွန်တော်တို့မိသားစုညမ်းဂိမ္း:ငါမြော်လင့်ခြင်းအကြောင်းသင်ဖို့စီမံခန့်ခွဲမယ့်သို့ဝေးတွေ့မြင်သောဤအရပ်သည်အစစ်အမှန်သဘောတူ။ ကပြောသည်ဘဲလျက်၊ကျွန်တော်ယုံကြည်နေတဲ့အချိန်မှာခြေလှမ်းရှေ့ဆက်ဒီနေရာမှာသင်တို့အဘို့အအတွင်းအပြင်ရဖို့အဖွဲ့ဝင်တဦးရဲ့ဧရိယာတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးသကဲ့သို့ဒါကြောင့်သင်အတည်ပြုကြောင်းကိုကိုယ်အဘို့အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကအကြောင်းပြောအဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ပေး။ ကျွန်တော်တို့နားလည်သဘောပေါက်လူတိုင်း၏ဆန္ဒအရအကောင်းဆုံးသင်ျဂိမ်းပျော်စရာ၊နှင့်ကျွန်တော်အမှန်တကယ်မျှော်လင့်သင်သည်အဘယ်သို့ရှာတွေ့မှာမိသားစုညမ်းဂိမ္းအမ်ဳိးအပေါ်အဘယ်အရာကိုသင်အလိုရှိသော။, လာရောက်လည်ပတ်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှင့်မေ့:သင်လိုချင်တာအခါတိုင်းအပူဆုံးသင်ျဖ်ာ္ေျဖေရး၊ကျနော်တို့ရရှိပါသည်သင်ဖုံးလွှမ်း! စောင့်ရှောက်မှုယူစေခြင်းငှါ၊သင့်ရဲ့လာမယ့် jerking အပျက်ကိုအကောင်းဆုံးကိုတဦးတည်းဖြစ်သော်လည်း။